gaarsiinta Fast: samaynta noocooda 5 saacadood gudahood
oolnimada High: oraah bixiyaa 24 saacadood oo taageero farsamo waxaa lagu bixiyaa waqti kasta
Factory waxaa dekedda u dhow, kharashka gaadiidka waa la badbaadiyey
Tan iyo 2000, Shenzhen HZD Technology Co., Ltd. ayaa bixinaya sax adeegyada machining CNC ay ka mid yihiin wax soo saarka, cilmi-baarista iyo horumarinta macaamiisha dunida oo dhan. Waxaan leenahay sumcad tayada, on gaarsiinta waqtiga, naqshadaynta, dhibaato xalinta xirfadaha iyo caawinta macaamiisheena la mashaariicda ugu adag. Waxaan ku siin CNC qaybaha machined iyo noocooda u Gaadiidka, is, Alternative Engergy, Aerospace, Medical iyo Power Gudbinta Warshadaha. wax soo saarka The sanadlaha ah ee wax soo saarka waa in ka badan 20 million oo doolarka Maraykanka ah, in ka badan 80% ayaa la siiyey shirkado waaweyn ka adduunka oo dhan.
More Baro +
guryaha Isgaarsiinta ciidankii
1. fursadaha Waxyaabaha: Al6063, 6065, 7075, iwm .;
Daaweynta 2. Dhulka: qayilo, sandblasting;
3. In line shuruudaha ilaalinta deegaanka RoHS;
WAX BADAN +
Isgaarsiinta guddi hore
Laser mashiinka xardho guryaha madaxa laser
Cinwaanka: No. 76, Langbei Industrial Zone, Tongle Community, Longgang Street, Degmada Longgang, Shenzhen